Ireo no tombony azo amin'ny hetsika manokana "Valentine" an'ny Pokémon GO | Vaovao IPhone
Pokémon GO dia hankalaza ny "Andron'ny mpifankatia" miaraka amina hetsika manokana
Tsy afaka mandà izany isika Pokémon GO dia fahombiazana amin'ny fahavaratra tamin'ny taon-dasa. Taorian'ny fandefasana azy dia olona an-tapitrisany no nidina an-dalambe tamin'ny ora rehetra nandraisana ny Pokémon tiany. Rehefa nandeha ny lazan'ilay fampiharana dia nikarakara i Niantic mandefa vaovao hanandrana hahazoana antoka fa ny isan'ny mpampiasa mavitrika indrindra dia mijanona mampiasa ny lalao. Saingy indrisy (na soa ihany), nihena ny lazan'ny lalao tato anatin'ny volana vitsivitsy.
Tamin'ny alàlan'ny tranokalany, ny ekipa Pókemon GO dia nanambara hetsika manokana hankalazana "Fetin'ny mpifankatia". Ity hetsika ity, manaraka ny andalana ny teo alohan'io, dia manana vanim-potoana fiasa izay hanananay bonus marobe ary ho mora kokoa ny misambotra pokémon sasany. Manomboka anio tolakandro amin'ny 20.00ora alina (ora Espaniôla) ny hetsika.
Hetsika manokana: fitaovana iray hamelomana ny fampiasana Pokémon GO
Olona an-tapitrisany no manohy mampiasa ny lalao isan'andro. Mpampiasa mavitrika izay mahazo vaovao farany am-pientanam-po ary maniry izany Niantic manavao ary avelao izy ireo hanohy hahita fitaovana sy fiasa vaovao hankafizany ny Pokémon GO.
Amin'izao akaiky ny fetin'ny mpifankatia izao dia tsy afaka nieritreritra fotoana mamy hanadoby ny vatomamy ho azonao isaky ny mahatratra ianao, foy ary mamindra Pokémon. Ny sakaizanao Pokémon koa dia miditra amin'ny fanahin'ny fetin'ny mpifankatia ary hahita vatomamy indroa haingana kokoa!
Volana vitsivitsy lasa izay rehefa nampiditra an'i Pokémon GO ny hetsika manokana, fomba iray hampirisihana ny fampiasana ny lalao amin'ireo mpampiasa mavitrika indrindra. Ireo hetsika manokana ireo dia ahafahan'ny mpilalao mahazo valisoa tsaratsara kokoa amin'ny fisamborana ny pokémon-ny. Fa ankoatr'izay dia hisy Pokémon sasany hiseho matetika kokoa, ka ho afaka hamolavola azy io haingana kokoa izy ireo.
Amin'ity tranga ity, hetsika manokana an'i valentine hanana ireto tombony manaraka ireto:
Pokémon mavokely sasany toa an'i Chansey sy Clefable no hiseho matetika kokoa
Cleffa, Igglybuff ary Smoochum dia ho mora hita ao amin'ny atody foy
ny maody modules haharitra enina ora
Ireo fiasa ireo dia azo ampiasaina manomboka androany (8 Febroary of 2017 amin'ny 20.00:XNUMX alina) mandra-pahatongan'ny 15 Febroary of 2017 amin'ny 20.00:XNUMX alina, fotoana hifaranan'ny hetsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Pokémon GO dia hankalaza ny "Andron'ny mpifankatia" miaraka amina hetsika manokana
AirPods dia hamidy any Amazon manomboka ny zoma